Kọmputa PCB Assembly, Printer PCBA Board, PCB rụpụta Assembly - Forred
Mmadụ Bịa ka Shenzhen Forred Technology Co., Ltd.
Portable Smart Ọkà Okwu
ahịa enwe Ịnụrụ
Nka na ụzụ Scheme
Car Navigation All-na-otu Machine
Main akara modul
Shenzhen Forred Technology Co., Ltd. e hiwere na 2016, anyị bụ ndị a ọkachamara electronic ngwaahịa emeputa na mba elu-tech enterprises.Our ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 350 ndị ọrụ, 15 n'etiti na agadi management pesonel, ata 56 engineering na oru na ndị àgwà akara mkpara.
Anyị nwere elu SMT mmepụta edoghi, Yamaha YS usoro elu kpọmkwem pụrụ isi chọta igwe 24 tent, Panasonice NPM D3 usoro pụrụ isi chọta igwe 8 sets.Global usoro akpaka nkwụnye igwe (Ai / RI) 10 tent, akpaka solder ngwa nbipute 10 tent, na nnyocha igwe dị ka SPI, AOI, X-ray. Kacha nta anyị nwere ike idowe 01005 mmiri na kacha bụ 0.3 Ẹtop BGA. Ugbu a, anyị na kwa ọnwa mmepụta ike nke SMT edoghi bụ 0.3 ijeri ibe na Ai / RI usoro 80 ọtụtụ nde ibe.
Oru oma Production ikike
Anyị nwere 4 ọkara sutomatic itinye edoghi na 4 ikpeazụ nzukọ e. 4 tent efegharị soldering machine4, akpaka ịgbado ọkụ igwe 30 tent, akpaka atọ mgbochi mkpuchi igwe 2 tent, Automatic ịghasa igwe 8 tent. Kwa ọnwa mmepụta ike bụ 300K nkeji (dị ka batrị management usoro).
igbe akwụkwọ ozi sara_pcb@163.com
mobile ike wireless chaja , obere wireless chaja, Pcba Manufactur, Electronic PCB Assembly , LED lighting, Final Assembly,